भ’गवान् शि’वको जन्म कसरी भयो ? – Khabarhouse
भ’गवान् शि’वको जन्म कसरी भयो ?
Khabar house | १४ माघ २०७६, मंगलवार ०२:५८ | Comments
काठमाडौं : शिव हि’न्दु ध’र्मका प्रमुख देव’ताहरू मध्ये एक हुन्। भगवानको तीन रूपहरू मध्येको एक शिवलाई वि’नाशकर्ताका रूपले चिनिन्छ । हि’न्दु ध’र्मका विभिन्न सम्प्रदायहरू मध्ये शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू शि’वलाई आफ्नो प्रमुख दे’वता मान्छन् र त्यसै अनुसार उनलाई महा’देव, परमेश्वर आदि नामले सम्बोधन गर्दछन् । शिवलाई प्रायजसो शिव लि’ङ्गको रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ ।
तर, भगवान् शिव जन्मिएका होइनन् प्रकट भएका हुन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ, जुन सायदैलाई मात्र थाहा हुन् सक्दछ l पुराणहरूमा भगवान् शिवको उत्पत्ति बारेको केही प्रसंगहरु पाइन्छ । जसलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ l हि’न्दु ध’र्मग्रन्थ विष्णु पुराणका अनुसार, भगवान् ब्र’ह्मा, भगवान् विष्णुको नाभि(नाइटो) कमलबाट उत्पत्ति भएका हुन् भने भगवान् शिव विष्णुको शिरको तेजबाट उत्पन्न भएका हुन् । जसकारण उनी सधैँ योगमुद्रामा रहन्छन् ।
एक पटक जब भगवान् विष्णु र ब्रह्मा अहं’कारमा परेर आफूलाई श्रेष्ठ बताउँदै झ गडा गर्न थाले तब बलिरहेको एक खम्बाबाट भगवान् शिव प्रकट भएका थिए । एक कथा वर्णन गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार ब्रह्मा लाई एक बालकको आवश्यकता थियो । जस कारण उनले तपस्या गरे । तब अचानक ब्रह्माको काखमा एक बालक प्रकट भए । जो रुँदै थियो । जब सो बालकलाई ब्रह्माले रुनुको कारण सोधे ।
तब त्यो बालकले आफ्नो नाम नभएका कारण रोएको बताए । त्यसपछि भगवान् ब्रह्माले उक्त बालकको नाम ‘रुद्र’ राखे जसको अर्थ हुन्छ ‘रुनेवाला’ । भगवान् ब्रह्माले सो नाम दिएर पनि शिवजी चुप लागेनन् त्यस पश्चात् ब्रह्माले बालकलाई चुप राख्न ८ नाम भने । रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान र महादेव । जसलाई पृथ्वीमा लेखिएको मान्यता छ । भगवान् शिवले ब्रह्माको पुत्रका रूपमा जन्म लिनुको पछाडि पनि विष्णु पुराणमा एक पौराणिक कथा छ ।
जसका अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्माण्ड जलमग्न थियो तब ब्रह्मा, विष्णु र शिव बाहेक अरू कोही पनि देव या प्राणी थिएनन। तब केवल विष्णुमात्र जलको सतहमा आफ्नो शेषनागमा बसेका हुन्थे। तब उनको ना’इटोबाट कमलको डाठमा भगवान् ब्रह्मा प्रकट भए । ब्रह्मा–विष्णु जब सृष्टिको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका थिए तब शिव प्रकट भए । तर, ब्रह्माले उनलाई चिन्न अस्वी’कार गरे।
तब विष्णुले ब्रह्मालाई दिव्य दृष्टि दिएर शिवबारे याद दिलाए । त्यस पश्चात् भगवान् ब्रह्माले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै भगवान् शिवसँग क्षमा माग्न थाले र शिव सँग पुत्रको रूपमा जन्म लिने आशीर्वाद माग्न थाले । जब भगवान् ब्रह्माले सृष्टिको रचना आरम्भ गर्न थाले तब उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शि’वलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए ।